Faroole | News From Somalia
Tag Archives: Faroole
MAQAL IYO MUUQAAL:-Faroole Oo Hanbalyo U Diray Axmed Madoobe Xassan Gurguurtana Ku DigtayFaroole:”kuwii doonayey in Somaliya iska dabawareega ka bixin Guuldaro ayaa u soo hoyatay Maanta”
Faroole ayaa Shir Jaraa’id ku qabtay xuruntiisaa cusub ee Garoowe, Faroole ayaa yiri, Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa Fartaag waan u hanbalyeynaynaa, wuxuuna intaas raaciyey Dadkii diidanaa Maamulada in ay dhibayso doorashada Axmed Madoobe.
“kuwii doonayey in Somaliya iska dabawareega ka bixin Guuldaro ayaa u soo hoyatay Maanta”
Siilaanyo, Faroole iyo Cabdi Ilay oo Itoobiyaan ka Amar qaata ayaan maaro u weynay iyo Xassan Gurguurte oo Uganda iyo Burundi ay waardiye ka hayaan, hadda Kenya ayaa ku soo biirtay in Soomaaliya qayb kamida ay ka taliso oo horjooge u samaysato.
Dhagayso Hanbalyada Faroole MP3 Halkaan Riix Ama Guji
PUNTLAND oo JUBALAND u hambalyeysay iyo maamulka cusub ee la doortay 15 05 2013
SAWIRO-BOOSAASO:-Dibad bax ka dhan ah Faroole oo ka dhacay Boosaaso.
Boqolaal shacab ah ayaa maanta isagu soo baxay Boosaaso kuwaasi oo ka soo horjeeday Faroolaha hogaanka u ah Maamulka labxay Puntland.
Dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay halku dhigyo ka dhan ah Faroole iyagoo waliba ka cabanayay sicir barar Magaalada kajira.
Ciidamada Faroole aya rasaas ku furay Dadka lamana soo sheegin qasaaro ka dhashay.
Rasaasta ayaa keentay shacabku ay guryahooda galaan, halka qaar kamid ah xaafadaha magaalada ay isaga baxeen shaqaalaha hay’adaha u shaqeeya. Xaafada Laanta Hawada oo ah xaafada ay ku yaalaan inta badan xarumaha hay’adaha NGO, ayaa la arkayey saaka iyagoo halkaasi isaga baxaya qaar kamid ah hay’adaha halkaasi degenaa.
Dibad baxa Maanta ayaa ahaa mid balaaran waxaana wararku ay sheegeen dibadbaxayaasha in ay argagax galiyeen diyaarado ay leedahay Shirkada Sarcen.
Warbaahinta Puntland ayaa wiilasha Faroole u diideen inay ka hadlaan dibac baxa inkastoo warbaahin Horseed kamid tahay si cad u baahiyeen dibax baxa.
Xiisada ayaa timid ka dib markii ciidamo hubaysan oo gadood ah kana soo baxay aagagii ay kaga jireen Duleedka Boosaaso ay xoog kula wareegeen Dekada Boosaaso.
Maamulka Boosaaso ayaa ku baxay Ciidamada Gadoodka ah laakin ilaa iyo haatan xal kama gaarin ciidamada galinkii denbe maanta la wareegay Dekada Magaalada Boosaaso.
asoco wixii soo kordhaa inshaALAH.
Uhuru Kenyatta iyo Xassan Gurguurte oo Siyaasadda Jubbooyinka Ku Heshiin Waayey iyo Gurguurte oo Muqdisho ku laabtay.
Posted on April 10, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Warar aan ka helayno Siyaasiyiin ku sugan Wadanka Kenya gaar ahaan Magaalada Nairobi ayaa xaqiijinaya in Xassan Gurguurte iyo Uhuru Kenyatta ay isku fahmi waayeen Siyaasadda Jubbooyinka, Xassan Gurguurte ayaa jawaabtii la siiyey noqotay,
(The Head of State noted that the decision by Kenya to move into Somalia and be part of the AMISOM peace keeping force of the African Union)
“Waxaa Madaxtooyada Kenya cadaysay, go’aanka Kenya ay ku joogaan gudaha Soomaaliya in uu qayb ka yahay Ciidamada Amisom ee ah Africaanka Midoobay ee Nabadda Ilaaliya”.
Wararka aan Siyaasiyiinta Kenya ku sugan ka helayno, ayaa sheegay in Uhuru Xassan Gurguurte ku yiri, “Aniga haddaa Kenya la ii caleema saaray, waxba Siyaasadda kalama socdo, Wasiirkii Gaanshaandhiggana lama kulmin, marka waad ku mahad san tahay sida aad oga soo qayb gashay caleemasaarkayga, Ciidanka Kenya waxay kamid yihiin ciidamada Amisom”.
Xassan Gurguurte ayaanan hadalkaas jeclaysan, wuxuuna sheegay in Magaalada Kismaayo xoog ay ku haystaan ciidamada Axmed Madoobe ee Raaskanbooniga loogu yeero. Siyaasadda Soomaaliya ayaa waxaa isku hardinaya Baadari Yoweri Museveni oo Uganda Madaxweyne ka ah, Kenya iyo Itoobiya.
Wakhtigaan waxaa Dalka Itoobiya iyo Uganda ku sugan Wafti Xassan Gurguurte u diray oo ay kala hogaaminayaan Wasiirro iyo Ra’isalwasaaraha xukuumadda Ri’dada ah Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Isha Warka English ka, Allafrica http://allafrica.com/stories/201304100761.html
Magalada Kismaayo oo dabayaqadii sanadii 2012 kii ay duulaan cir iyo dhul ku soo qaadeen ciidamada shisheye ee kenya tasoo suura galisay in si toos ah ay u qabsato magalada Kismayo oo ay maamulayeen 5 sano la soo dhaafay ciidanka Mujaahidiinta Xaraktul shabab Mujaahidiin.
Aragtidii ugu badneed ee laga bixiyay soo galistii ciidamada kenya ayaa ehayd in ciidanka kenya in ay qabsadeen magalada kismayo iyo dhamaan goblada Koofurta somalia walow ay jireen dad qabay fikrad ka duwan taas oo ehayd in uun mesha laga saraa mamulkii xukumayay 5 sano ugu danbeesay magaaladaasi walow markii danbe xaalku seey filayeen u noqon wayay oo si toos kenya u qabstay magalada ayadoo garab ka helee koox ay saxiib la tahay.
Kismaayo oo markii ay qabsaden ciidamada shisheeye ee kenya waxaa soo ifbaxyeen wajiyo fara badan oo kala duwan haba ugu horeyaan kooxo doonaa in mar ay ka noqdaan gobalada jubooyinka madaxweyne Gobaleed iyo kooxo dane qarsoon wato tasoo midba dantiisa qaaska uu doonaa in u ka dhax argo maamulka lagu wado in laga dhiso jubbooyinka.
Waxii ka danbeyay markii lagu dhawaaqay in la sameynaa mamul gobleed la doonaa in loogu magac daro Jubbaland kasoo durba qeylladhan badan xooga ay ka soo baxday qeyba badan o shalay aaminsana in looga xoreynaa magalada Xarakadii Shababul Mujahidiin walow xaalku sida noqon wayay oo ay cadaatay in kenya rabto in koox gooni ah ay siiso maamulka jubbooyinka
Kismayo Ma Noqon Kartaa Magaalo u Ka Hirgali Karo Nidaamka Jubboyinka Loogu Magac daray.
Anoo laba u kala qadaa marka hore shaqeynta maamul laga dhiso shirka kismayo waxan ku bilabaa .
1: Maamul ka soobaxo shirka kismayo waxuu shaqeyo wa inta ciidanka kenya ama taangiyada kenya jogaan jubooyinka waayo hadii ay ka baxaan ciidanka kenya waxa hubaal cad ah in kismaayo noqonee sidii Magalada Xudur o kale.
waxa kaloo hubaal ah hadii maamulkaasi lagu wado in laga dhisaayo jubbaland ay dhicikarto in siyaasiyiin badan ay durba ka kenan qeylla dhaan wa hadii ay dantooda ka wayaan.
2: dowladda uu madaxda ka yahay saacid ayaa si toos u shegtay in aysana marna aqoonsanen waxa ka socodo shirka kismaayo waxii ka soo baxana aysan aqoonsan doonin tasoo ku ah kooxda kismayo ku shiree dhibato kaga soo sokeeso inteysanba bixin ciidanka keyna oo hadey baxaan shabab ay si toos ah ula wareegi doonto magaalada kismayo
3:Hadase waxaa dhulkaasi Maamul loo sameeyo ku heshiin la’ qabaa’iladii, iyadoo sidoo kalana ay arrintaasi ku kala qeybsan yihiin dowladda Soomaaliya iyo Maamulka KMG ah ee Axmed Madoobe mid walibana waa uu isla saxsan yahay
Axmed madoobe aya asgoo qabo fikir ah in uu xaq u leeyahay in u meel marayo shirka kismaayo asoo ku andaconaa in loo wada dhanyahay o aysana ka maqneen rer gooni ah waloow ay jiraan dad badan oo qeylladhaan ka kenay in an loo dhameyn sharikaas tasoo keeni karto dagaalo horleh oo ka dhaco gobalka jubbooyinka.
Mala oran karaa qabsashadi kenya ee kismaayo kooxda Icti’saam Baa wax ka ogeed
shalay ayaa mar quraa waxa is badlay aragtida qeyba ka mid ah dadki aamisanaa in kooxda culumaa’usuu ka ah ay ahayen culuma fiican oo ka shaqeynaa maslaxada umuda somaliyeed tasoo ay in badan ku dhaleeceyeen ciidamada mujaahidiinta oo lagu sheegay in ay diideen in ay wax ka maqlaan kooxda leextay ee ictisaam walow waxii shalay shababul mujahidiin ka digeen soo baxeen
Waxba waxa ka daran shalay ayey aheed markii madaxii dhaqaalaha e kooxda ictisaam Shukul u si toos ah u tagay magalada kismaayo asoo leh waxaan ahay musharax u taagan jagada Jubbaland tasoo bananka soo dhgtay qeylladii kooxda ictisaam madama ay si toos ah ugu biireen maamulka daba dhilifka asoo ku andocooday in ay tahay wax wajib ka saran yahay in u noqdo madaxweyne jubbaland asoo amaanay dustuurka dhaaguutka ah e u yaal kooxda Fadaraalka.
Fariin Ku Socoto Kooxda Kismaayo ku Shiree iyo Ictisaamka Garab Taagan
Somalida waxa ay tiraah nin waxa tagan garanwayay ma garan karo waxa imaan doonana tasoo macanaheeda yahay waxa manta ka socodo kismaayo .
kismaayo shalay hadiii aad aaminsaneedeen shabab uun baa laga saraa kadib baa qabsaneesaan in fikirkaasi mesha ka baxay oo manta xaal faraha ka baxay o arintu u gashay gacanta ciidanka galada kenya oo marka ay baxaana aad la bixi doontaan ee inta waqtiga iyo tariikhda xuman iska hara
W/Q :Aqoonyahan Saciid Islam.
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo waxay sheegayaan inuu maanta halkaas gaaray Maxamed Ibraahiiim Shakuul oo ka tirsan Wadaadada Ururka Al-Ictisaam.
Barqanimadii maanta ayuu Shakuul ka dagay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose, waxaana halkaas kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan qaraabadiisa iyo xubno ka tirsan Maamulka ka taliya magaalada Kismaayo.
KISMAAYO: Shakuul oo Kismaayo gaaray sheegayna inow yahay Musharax yahay!
Maxamed Ibraahim Shakuul waxaa soo dhaweeyey Axmed Madoobe, waan ogayn Wadaaddada Al-Ictisaam ee Kenya jooga waligood in ay dhaqaalo ku bixin jireen in Xarakada Al shabaab laga saaro Magaalada Kismaayo. Shakuul wuxuu qabtay Shir jaraa’id wuxuuna shaaciyey in uu Musharax yahay.
Wadaadakan oo ka mid ah Ururka Al-Ictisaam ayaa waxa uu ganacsi ku leeyahay dalka Kenya, waxaana wareysi uu mar sii horeysay siisay mid ka mid ah Telefeshinada Soomaalida uu ku sheegay inuu gumeysi u arkin Ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan, isagoona tilmaamay in Ciidamada Kenya iyo kuwa la mid ah ay u yimaadeen inay dalka nabadeeyaan.
Akhri Qormadii ay ka diyaariyeen Guddiga Golaha Baraarugga Islaamka Xaaladda Siyaasadeed ee Magaalada Kismaayo Halkaan Riix Ama Guji
Dhagayso Shirka Jaraa’id ee Maxamed Ibraahim Shakuul MP3 Halkaan Riix Ama Guji
Dhagayso Shakuul oo Dumarka taageero ka raadinaya MP3 Halkaan Riix Ama Guji
Fadeexaddii Shakuul Video Muuqaal ah Halkaan Ka Daawo Youtube Riix Halkaan
Daraasaad Cilmiyeysan oo aan ka samaynay Shakuul Qormo hore Halkaan Riix Ama Guji